Minisitra Saodiana Mandrahona An-tserasera Mpisera Twitter Iray · Global Voices teny Malagasy
Minisitra Saodiana Mandrahona An-tserasera Mpisera Twitter Iray
Voadika ny 21 Marsa 2013 16:09 GMT
Vakio amin'ny teny Español, عربي, বাংলা, Ελληνικά, Français, English
Voatonona ho nandrahona ny hitory mpisera Twitter iray – noho ny fanompana azy tao amin'ny sehatry ny fibilaogena bitika ny Minisitry ny Fampahalalam-Baovao sy ny Kolontsaina Saodiana Abdelaziz Khoja.
Nisy mpisera iray manana ny anarana @Esaeed1 nisioka toy izao tamin'ny minisitra [ar]:
@Esaeed1: Minisitry ny Fampahalalam-Baovao, fantatray rehetra fa ianao ny dindo na ny marina kokoa Fibaikoan-Davitra eo am-pelatanan'ny manambola sy ny fahefana. Miangavy anao tsy hanenja-tsandry amin'ny manaraka.
Ary dia nisy kaonty Twitter iray (tsy voamarina) tamin'ny anaran'ny minisitra namaly:
@abdlazizkhoja: Raha ny marina afa-mitory anao tamin'izay nolazainao aho. Mahasahia soraty ny tena anaranao
Namaly i Fahad Al Dahhas:
@FahadAl_Dahhas: Hitory azy noho ny heviny ianao. Efa fantatro fa fako ny minisitsika ary resy lahatra aho ankehitriny. Torio ny tenanao mialoha ny itorianao ny hafa
Ary namaly ny minisitra:
@abdlazizkhoja: Ny fanaony, ny fomba namelezany ahy ary ny fomba iampangany ahy amin'izay tsy mety no nitarika ahy hanao izany. Raha mety aminao izany fomba firesaka izany dia ekeko ny fanapaha-kevitrao.
Mahaliana ny mahita fifanakalozan-kafatra toy izany eo amin'ny mpiserasera sy ny manampahefana ao amin'ny firenena nalahatry ny Reporters sans Frontieres ho Fahavalon'ny Internet.